Hurumende Yosimudzira Kupa vanhu Chikafu Pakupera kweChibvumirano neWFP
Munyori mukuru mubazi rezvezvemagariro evanhu VaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Programme rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna Kurume sekuwirirana kwavange vaita sezvo vanhu vange vachitarisirwa kuti vanenge vodya zvavanenge vakohwa.
Asi izvi hazvina kuitika sezv mamawe matunhu aine nzara.
VaMasanga, apo vange vari kutsanangurira komiti yeSeneti inoona nezverunyararo matanho ari kutorwa nehurumende kuona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo nyika isina kuwana goho rakakwana.
VaMasanga vati havasi kushaya hope nekuti kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzisina kuwana goho munyika mune chibage chakawanda.
Vati hurumende pari zvino iri kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni mana kusanganisira avo vaisibatsirwa neWFP iyo yakamira kupavanhu chikafu muna Kurume sezvayainge yatenderana nehurumende.
VaMasanga vati vanotarisira kuti huwandu hwevanhu vanoda rubatsiro ruchawedzera sezvo pari zvino pari kuitwa ongororo yekuwona kuti vanhu vangani vanoda rubatsiro mushure megoho regore rino.
Vati kana dai mwaka wakanaka vangadai vakamira kupa vanhu chikafu muna Kurume apo panotanga vanhu kukohwa asi havana kuita izvi nekuti nzvimbo zhinji munyika hadzina kuwana goho rinokwana.
VaMasanga vati pari zvino Grain Markerting Board ine chibage chinoita kuti vaenderere mberi nechirongwa chavo chekupa chibage kune avo vane nzara.
Pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopihwa makirogiramu gumi echibage.
Vatiwo chibage chinopihwa pachena pasingaitwe zvamatongerwo enyika.
Kunze kwechirongwa chekupa vanhu chibage pane zvimwe zvirongwa zvinobatsira kurwisa nzara zvakaita seHarmonised Cash Transfer Program icho chiri kubatsira vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu.
VaMasanga vati kutanga mwedzi unoouya mari inopihwa mhuri ine munhu mumwe pasi pechirongwa ichi ichakwira kusvika pamadhora makumi maviri ekuAmerica uye mhuri ine vanhu vatatu inenge yave kuwana madhora makumi mashanu ekuAmerica.
Vatiwo vaisafunga kuti nzara inobata vanhu kumaruwa chete asi vakaona kuti izvi handizvo nekudaro vave kupawo vane nzara mumadhorobha chikafu.
Vamasanga vati vakambotanga vachipa vanhu ava chikafu asi parizvino vave kuvapa mari kuti vazvitengere chikafu vega.
Vaenderera vachiti vano batsirawo vapoteri zviuru gumi nezvishanu vari paTongogara Refugee Camp nechibage.
VaMasanga vati chichemo chavo chikuru inyaya yekuti vanopihwa mari shoma nebazi rezveemari kuti vatenge chibage asi vakati chinofadza ndechekuti Grain Marketing Board hairambi kuvakweretesa cchibage kana mari yavo yapeera.
Vachitaurawo pamber pekomiti iyi, mushandi mukuru mubazi rezvekurima Muzvinafundo, Obert Jiri, vati huwandu hwechibage chakakohiwa gore rino hwakadzikira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana.
Vatiwo dunhu reMashonaland Central ndiro rega munyika rine chikafau chakawanda kudarika charinoda kana kuti Surplus pachirungu.
Mashonaland Central neEast ane chikafu chibage chakawanda asi ane mamwe matunhu madiki asi chibage chakakwana.
Masvingo, Matabeleland North ne South haana chibage chakakwana.
VaJiri vati kunyange hazvo nyika yakawana chibage chisina kukwana, chibage chiri munyika chinokwana kana vabatanidza nechimumatura eStretegic Grain Reserve.
Asi vati zvakakosha kuti hurumende nemakambani anogaya hupfu atange kutenga chibage chinosvika kana kudarika matani zviru mazana matatu kubva kunze kwenyika vachiti izvi zvinobatsira nyika zvikuru.
Vatiwo hurumende inofanira kuona kuti GMB yatanga kuendesa chibage kunzvimbo dzisina chibage chakwana kuti vanhu vasafe nenzara.
Nzvimbo nzine nzara yakananyanya dzinoda runatsiro nechimbichimbi dzinosanganisira Chimanimani, Bikita, Zaka, Beutbridge, Matobo, Bulilima neMangwe.
Komiti iyi ichanyora gwaro rayo iro ichatura kudare reSeneti uko richazeiwa uye makurukota anechekuita nenyaya iyi ozotora matanho pamusoro pezvisungo zvinenge zvabuda muSeneti.